Suxufi reer Talyaani ah oo shaaciyey kooxda ka dheesha Premier League ee hoggaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa Kalidou Koulibaly – Gool FM
Haaruun May 31, 2020
(Naples) 31 Maajo 2020. Suxufi reer Talyaani ah ayaa shaaciyey kooxda ka dheesha horyaalka Premier League ee hoggaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa daafaca dhexe ee Napoli, Kalidou Koulibaly.
Kooxda Man United ayaa markasta ku jirta loollanka loogu jiro daafaca dhexe ee Naadiga Napoli Kalidou Koulibaly, sida uu sheegay Suxufiga reer Talyaani ee Niccolo Ceccarini.
Wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalka Koulibaly ayaa isbuucyadii u danbeysay isa soo tarayay, iyadoo Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle United iyo Chelsea dhammaantood la la xiriirinayo saxiixa laacibkan.
Manchester City ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay ka fiirsaneyso inay xagaaga u dhaqaaqdo 28-sano jirkaan, kaasoo la sheegay in loo ogolaan doono inuu ka tago kooxda Napoli ka hor kal ciyaareedka 2020-21 haddii lagu helo qiimaha saxda ah.
Ceccarini ayaa caddeeyay in inkastoo xiisaha uu ka hayo meel kale, kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayey macquul tahay inay helaan adeega laacibkan, iyadoo dagaal adag kala kulmaya kooxaha ay xifaaltamaan.
“Koulibaly way caddahay in muddo ah,” ayuu Ceccarini u sheegay Tuttomercatoweb waxaana uu hadalkiisa intaa ku daray: “Napoli waxa ay ku qiimeysaa 100 milyan oo euro oo u dhiganta 90 milyan oo gini, laakiin waa qiimo aad u badan oo aysan kooxi ka bixi karin, iyadoo adduunka uu dhibaateeyay COVID19.”
“Isaga, mustaqbal Premier League ayaa macquul ah, Manchester United mar walba waxay ku jirtaa orodka, laakiin Liverpool iyo Tottenham ayaa sidoo kale dhowaan ku soo biiray.”
Daafaca dhexe ayaa u saftay kooxdiisa Napoli 233 kulan tan iyo markii uu uga soo biiray Naadiga Genk sanadkii 2014-kii.